सफल बन्न चाहनुहुन्छ ? यसो गर्नुहोस ! - रामकुमार परियार
Home / विविध / सफल बन्न चाहनुहुन्छ ? यसो गर्नुहोस !
प्रत्येक मानिसको जिवनमा सफल हुने चाह रहेको हुन्छ र यसको लागि मेहनत पनि गरिरहेको हुन्छ । तर कहिलेकाही सही मार्गनिर्देशनको कमिले त्यो मेहनत बालुवामा पानि हालेसरी खेर जान्छ । हामी तपाईको मेहनत त्यसै खेर जानुहदैन भन्ने पक्ष्यमा छौ । त्यसैले सफलताको कामना सहित जीवनलाई कसरी सफल बनाउने भनेर मैले यहाँ दशवटा सुत्रहरु प्रस्तुत गरेको छु । यी सुत्रहरुको प्रयोगले तपाईको जिवन साच्चै नै सफल हुनेछ ।
३. धैर्यशिल बन्नुुहोस् । एक रात मै सफल हुन सकिदैन भन्ने तथ्य बुझ्नुहोस् र लगातारको मेहनतले नै सफलता देखाउने हो भन्ने कुरालाई ख्याल गर्नुहोस् ।
५. सधै खुल्ला सोच राख्नुहोस् । जीवनमा सफलता पाउन धरै बाटाहरु रहेको तथ्य नभुल्नहोस् ।
६. सफल व्यक्तिको जिवनीबाट पाइने एउटा ज्ञान भनेको स्याक्रिफाइज हो । त्यसैले केही ठूलो पाउन ससाना कुरा गुमाउनपर्छ भने नडराउनु होस् । त्यस्तै टिभी, इन्टरनेट, अनावश्यक घुमघाम र खराब बानीबाट टाढा बस्नुहोस् ।
७. आफू सहि बाटोमा छु कि छुइन भनेर सधैभरी सचेत रहनुहोस् । यदि गलत बाटोमा हुनुहुन्छ भने जति मेहनत गरेपनि त्यसले तपाईको लक्ष्यमा केही महत्व राख्दैन ।
८. लक्ष्यमा पुग्न आफूले कति बाटो हिड्न बाकी छ भन्दा पनि कति बाटो हिडिसके भनेर सधैभरी ख्याल राख्नहोस् । यसले एकातर्फ आफूले गरेको मेहनत सम्झाउछ भने अर्को तर्फ लक्ष्यमा पुग्न थप उर्जा र प्रेरणा दिन्छ ।
यति गर्नुभयो भने तपाईं अवश्य सफल हुनुहुनेछ ।